अमेरिकाका मेयरले नियुक्त गरे बिष्णुमायालाई सल्लाहकार « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अमेरिकाको न्युजर्सी राज्यको जर्सी सिटी शहरका मेयर स्टेफन फुलपले नेपाली सामाजिक अभियन्ता डा. बिष्णुमाया परियारलाई डाईभर्सिटी तथा ईन्क्लुसन सल्लाहकार बोर्डमा नियुक्त गरेका छन् । १२ सदस्यीय सल्लाहकार बोर्डमा साउथ एशियन कम्युनिटीबाट डा. परियारलाई नियुक्त गरिएको हो । जर्सी सिटी शहरमा साँस्कृतिक, भाषिक, लैंगिक र क्षेत्रको आधारमा हुने विभेदको अन्त गर्न अफिस अफ डाईभर्सिटी तथा ईन्क्लुसन अन्तर्गत उक्त सल्लाहकार बोर्ड स्थापना गरिएको जनाईएको छ ।